Farmaajo Oo si xad dhaaf ah u amaanay Yuweri Museveni. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Mar 14, 2019 50 0
Farmaajo iyo Museveni oo wada socda.
Madaxweynaha dowladda federaalka ayaa amaanay Yuweri Museveni, xilli dhawaan uu aflagaadeeyay shacabka Soomaaliyeed.
Isagoo kulan kaga qeybgalaya magaalada Kampla ee caasimadda wadanka Uganda ayuu madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Farmaajo wuxuu amaan kala dul dhacay baaderi Yuweri Museveni oo ah madaxweynaha wadankaas.
“Waxa sharaf ii ah inaan Kampala joogo aniga oo Shirka “Africa Now” kala qayb-gelaya madaxda Afrika, ganacsatada waaweyn iyo aqoonyahanka ku takhasusay horumarka. Waxaan Madaxweyne Yuweri Museveni iyo Dowladda Uganda uga mahadcelinayaa soo dhawaynta iyo martisoorka diirran ee aniga iyo waftigayga na loo fidiyey. Waxaan sidoo kale hambalyeynayaa qabanqaabiyayaasha shirkan—gaar ahaan Xarunta Istaraatijiyadeed ee Hoggaaminta oo shirkan suurtagelisey”. ayuu yiri madaxweynaha dowladda federaalka.
cusmaan 2664 posts 5 comments
Askar katirsan Shisheeyaha Oo lagu dilay wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye.
Wasiir ku xigeen katirsan xukuumadda Kheyre Oo Is casilay.
Sawirro: Beelaha Abgaal iyo Xawaadle Oo Boqolaal kun oo doollar diyo u kala…
Munaasabad ballaaran oo dhawaan ka dhacday wilaayada islaamiga ee Hiiraan ayaa lagu soo afjray colaad in muda…
Askar katirsan Shisheeyaha Oo lagu dilay wadada isku xirta Muqdisho…